Galmudug oo beenisay in ay khilaaftay go’aanka D.Federaalka ee xiisadda Khaliijka – XAMAR POST
Maamulka Galmudug ayaa iska fogeeyay warqad wareegto ah oo lagu sheegay in ay ka soo baxday Maamulka Galmudug,taas oo lagu sheegayo in Maamulka Galmudug uu dowladda ku khilaafsan yahay go’aanka dhex dhexaadnimada leh ee ay ka qaadayay khilaafka u dhaxeeya Waddamada Carabta.
Agaasimaha Warbaahinta Madaxtooyada Maamulka Galmudug Maxamuud Cismaan Cabdulle ayaa sheegay in warqadda lagu baahiyay baraha bulshada ay tahay been abuur islamarkaana uusan hadda jirin go’aan ka soo baxay maamulka Galmudug oo la xiriira arrinta Khaliifka Carabta.
Maamullada Koofur Galbeed,Puntland iyo Hirshabeelle ayaa horay u sheegay in dowladda dhexe ay ku khilaafsanyihiin go’aanka dhex dhexaadnimada ah,waxaana go’aanka dowladda khilaafsan ku baxay Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullahi Cosoble.
Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa lagu sheegay in go’aanka dowladda dhexe ay qaadatay uu ahaa mid iyaga u gaar ah islamarkaana maamul Goboleedyada ku heshiiyeen in dib u eegis lagu sameeyo,laakiin waqtigii loo qabtay dib u eegistaas ay dhamaatay sidaasna uga baxay Maamulka Koofur Galbeed.
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Qeybo Ka Mid Ah Gobolka Gedo